eNasha.com - ग्रेटर नेपालको सपना
यस्तो अवस्थामा हामी साधारण नेपालीले के गर्ने ? भएका प्रमाणहरुलाई एकत्रित पारेर जनमानसलाई सही सूचना दिने कि चूप लागेर बस्ने ? के तपाइँ हामी चूप लागेर समस्या समाधान हुन्छ ? तपाइँ हामीले गरेको एउटा सानो प्रयास पनि कतै ठूलो समाधान बनेर पो आउँछ कि !
यस्तै यस्तै आशा र सम्भावनाको पोको बनेर आएको छ, चलचित्रकर्मी मनोज पण्डितको डकुमेन्ट्री "ग्रेटर नेपाल" । जहाँ हिजो हाम्रा पूर्खाले आर्जेको देश, त्यसभित्रको दुःख र समय क्रममा हामीले गुमाएका ती ठाउँ र अहिले गुमाइरहेका स्थानहरुका बारेमा बोलिएको छ । झन्नैझन्नै उड्न लागेको विशाल प्लेन आकारको हाम्रो देश नेपाल अहिले खुम्चिएको छ । पहिले हामीले जितेका महाकाली पूर्वका अनेकन् क्षेत्र र मेची पारिको टिस्टा हामीले चाहेको खण्डमा फिर्ता पाउन सक्छौँ । किनभने अंग्रेजसँगको युद्धमा हामीले हारेका यी क्षेत्र अंग्रेजले भारत छाडेपछि स्वभाविक रुपमा ती हामीले पाउनु पर्ने थियो । जसरी मकाउ र हंगकंग चीनले फिर्ता पायो । जसरी भारतले गोवा फिर्ता पायो । हामीले त्यसैगरी अंग्रेज-नेपाल सुगौली सन्धीमा गुमाएका भूभागहरु फिर्ता पाउनुपर्ने थियो ।
तर आन्तरिक द्वन्द्वमा फँसेको राणा राजले ती फिर्ता पाउने अवस्थामा पनि फिर्ता लिएन । त्यसपछिका समयमा भारतले नेपाललाई प्रजातन्त्र ल्याइदिने र अनेकन् विकासे काममा सहयोग गरेको अनेक ध्वाँसमा हामीले ऊसँग हाम्रा भूभाग फिर्ता लिने कोसिससम्म गरेनौँ । त्यो कोसिस गर्दा कतै भारत रिसाउने हो कि ! कतै हाम्रो सत्ता धरापमा पो पर्ने हो कि ! जस्ता आफ्नै कमजोरी र नीहित स्वार्थका कारण हामीले पाउनुपर्ने चिज पनि पाएका छैनौँ ।
तर के यी साना मसिना कुराले हामीलाई सपना देख्नबाट रोक्न सक्छ ? भोलिको हाम्रो नेपाल हुनसक्छ, ग्रेटर नेपाल नै हुनसक्छ । यसमा प्रशस्त सम्भावना छन् । आन्तरिक कलहबाट पटक पटक फाइदा उठाउने भारतलाई ठेंगा देखाउन हामीले आज सम्मुनत नेपालको रेखा कोर्नुपर्छ र यो समुन्नत नेपालले भोलि ग्रेटर नेपालको सपनालाई अवश्य पनि पूरा गर्न सक्छ । यस्तो विषयलाइ मनोज पण्डितले उठाएर स्तुत्य काम गरेका छन् ।
रिलिज अभिनेता हल्ला प्रविधि सेक्स सेलेब्रिटी समारोह सुटिङ पेज थ्री अभिनेत्री